Ahoana ny fomba hahazoana asa any Korea amin'ny maha-vahiny? - ALinks
Raha efa manana fahazoan-dàlana hiasa, na Koreana ianao, dia midina mijery ny fomba hahitana asa any Korea.
Raha tsy manana fahazoan-dàlana hiasa ianao, ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mitady asa. Ka midìna hijery ny fomba hahitana asa any Korea.
Ahoana ny fomba hahitana asa any Korea?
Afaka manomboka mijery manodidina ireo tranokala lisitra asa mahasoa sasany ianao.
craigslist - Masinina mitady asa na tsy nahy ity. Ny doka momba ny asa kosa etsy ankilany dia saika amin'ny teny anglisy foana, ary ny olona tadiavina dia saika vahiny foana. Mety tsy ny toerana hahitanao ny asanao nofinofisinao, fa io angamba no toerana mora indrindra hanombohana.
Saramin ary JobKorea - Satria amin'ny fiteny koreana daholo ireo tranonkala roa ireo dia mety ho sarotra ny mizaha azy amin'ny voalohany. Izy ireo, na izany aza, vavahady asa lehibe ho an'ny Koreana mitady asa, ary misy toerana maro atolotra amin'ny indostria maro samihafa izay mitaky fitenenana vahiny.
PeopleNJob - Inoana fa io no vavahady asa lehibe ananan'ny vahiny mitady asa any Korea. Amin'ny fahitana azy voalohany, mampatahotra izany, saingy ho maivamaivana ianao amin'ny fahafantarana fa misy toerana maro napetraka amin'ny teny anglisy.
LinkedIn - Tsy toy ny vavahady hafa voatanisa etsy ambony, ity no toerana voalohany ahitàna ireo orinasa lehibe iraisam-pirenena mitady mpiasa ao amin'ny sampana Koreana. Ny orinasa dia mamoaka fanokafana asa tsy tapaka ary afaka mahazo fampandrenesana mivantana amin'ny findainao!
Job Fair any Korea
Atao any Korea ny foara fanaovana asa isan-taona, mifantoka amin'ireo vahiny. Ireo fampirantiana asa ireo dia hizara sokajy roa matetika: ny an'ny mpianatra iraisam-pirenena sy ny an'ny mponina iraisam-pirenena. Azonao atao ny mijery ny datin'ireto tsena ireto amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny fikarohana ireto teny manaraka ireto:
Oegugin chwieopbangnamhoe /외국인 취업 박람회 (amin'ny teny anglisy: "Fair fair ho an'ny mponina vahiny")
Oeguginyuhaksaeng chaeyongbangnamhoe /외국인 유학생 채용 박람회 (amin'ny teny anglisy: "Fair fair ho an'ny mpianatra iraisam-pirenena")
Fahafahana asa any Korea Atsimo ho an'ny vahiny
Ny fampianarana teny anglisy dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra ho an'ireo mpila ravinahitra maniry hipetraka sy hiasa any Korea atsimo. Ho an'ireo vao manomboka, ny fampianarana ny teny anglisy dia tsy mila fahalalana betsaka amin'ny teny koreana; raha ny marina dia misy andrim-panjakana sasany maniry ny mpampianatra tsy fiteny roa mba hanerena ny mpianatra Koreana hahazo sy hampiasa anglisy. Any Korea, ny fahaizan'ny anglisy dia fahaiza-manao sarobidy indrindra, mahatonga ny mpampianatra anglisy ho iray amin'ireo asa be mpitady indrindra.
Ankoatry ny fampianarana anglisy, IT, ny asa amin'ny birao ankapobeny, ny famokarana ary ny asa amin'ny fahasalamana, siansa, fikarohana ary ny haitao dia faritra rehetra ahitan'ny vahiny tombony betsaka.
Ahoana ny fomba hahazoana asa any Korea amin'ny maha-vahiny
Ahoana no hahitana ny asa tsara indrindra any Etazonia?
Te hahazo asa any Italia ianao? Torohevitra sy zavatra takiana eto !!
Ahoana ny fomba hahazoana asa any Peroa? Zahao eto!
Novambra 26, 2020
Ahoana ny fomba hahazoana asa any Zambia?